Shiinaha oo ku jeesjeesay Sheegashada ah in Taleefanka Madaxweyne Trump ay Dhagaystaan. |
Shiinaha oo ku jeesjeesay Sheegashada ah in Taleefanka Madaxweyne Trump ay Dhagaystaan.
U.S. President Donald Trump talks to reporters about the killing of journalist Jamal Khashoggi in Turkey during a bill signing ceremony at the White House in Washington, U.S., October 23, 2018. REUTERS/Leah Millis - RC12BD7CA670
Dawladda Shiinaha ayaa kaftan ahaan ugu talisay in madaxweynaha Maraykanku uu iska badalo taleefanka Iphone-ka ah ee shirkadda Apple samayso uuna qaato mid uu Shiinuhu sameeyo, iyadoo Beijing ay diiday wararka sheegaya in ay dhagaysato taleefannadiisa khaaska ah.
Wargeyska New York Times ayaa daabacay in Shiinaha iyo Ruushku ay dhaqaystaan taleefannada uu Trump ku hadlo marka uu adeegsanayo Iphonekiisa shaqsiga ah, iyaga oo dalalkaas ay isku dayayaan in ay helaan sida uu madaxweynuhu u fikirayo.
Wargeysku wuxuu sheegay in kaaliyeyaasha madaxweynaha ay uga digeen in taleefoonnada noocaas ah aysan ammaan ahayn.
Trump ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warkaas.
Isaga oo Twitter arrintaas uga hadlayana wuxuu sheegay in uu adeegsado taleefoonnada ay dawladdu meelmarisay oo kali ah.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Hua Chunying ayaa si kaftan ah uga jawaabtay Khamiistii iyada oo shir jaraa’id qabatay.
“Markaan warbixintaas akhriyay, maanta waxaan dareemay in run ahaantii ay Maraykanka joogaan dad wax walba u samaynaya sidii ay u qori lahaayeen qoraalka ugu wanaasan ee Oscar,” ayay tiri.
Waxay tilmaantay in taleefoonnada ay soo saarto shirkada ugu wayn Shiinaha laga yaabo in ay yihiin kuwa ugu ammaansan.
“Haddii ay si run ah uga walwalsan yihiin in taleefoonnada Apple loo dhaco, markaas waxay ku badalan karaan Huawei.
“Haddii ay u arkaan in arrintaasi aysan sahlanaynna, markaas si ay ammaankooda u sugaan waxay joojin karaan adeegsiga isgaarsiinta casriga ah oo dhan, waxayna calaaqaadka u jari karaan dunida oo dhan” ayay tiri.
Ruushka ayaa sidoo kale diiday in uu dhagaysto taleefoonnada madaxweyne Trump.
“Sheekooyinka noocaas ah waan iskaga maadaysanaa,” ayuu yiri Dmitry Peskov oo ah afhayeenka madaxweynaha Ruushka.
Warbixinta wargayska lagu qoray ayaa soo xigatay masuuliyiin hadda shaqeeya iyo kuwo horay u shaqayn jiray oo sheegay in ay jahwareer kala kulmeen sida caadiga ah ee madaxweyne Trump u wajaho ammaanka waxyaabaha elektaroonigga ah.
Waxay sheegeen in hay’adaha sirdoonku ay ogaadeen in Shiinaha iyo Maraykanku ay dhagaysanayaan taleefannada madaxweynaha ee Iphone-kiisa ayna isku dayayaan in ay ogaadaan sida uu madaxweynuhu u fikirayo iyo sidii ay saamayn ugu yeelan lahaayeen.
Shiinaha iyo Maraykanka oo ah labada dal ee dunida ugu dhaqaale badan ayuu ka dhaxeeyaa dagaal sii kharaaraanaya oo dhanka ganacsiga ah.
Bishan horraanteedii ayuu safiirka Shiinaha u fadhiya Maraykanka Cui Tiankai sheegay “in ay ku jahwareereen” cidda uu madaxweyne Trump ka dhagaysto siyaasadaha ganacsiga.